Mayelana nathi - Isifundo seBhayibheli somKristu omuSha/ or New Christian Bible Study
Mayelana neNew Christian Bible Study Project
I-New Christian Bible Study Project iyindawo yokuhlanza inthanethi kubantu abanesithakazelo eBhayibhelini, hhayi nje ngomqondo wayo onamandla, kodwa nangomqondo wangaphakathi, ongokomoya. Umbono wokuthi iBhayibheli unencazelo yangaphakathi umqondo omdala. UJesu wayazi, futhi wabhekisela kuwo. Wayevame ukukhombisa ukuthi iTestamente Elidala yayinezincazelo ezijulile kunokuba zazibonakala kuqala. Isibonelo, uJesu watshela abafundi bakhe ukuthi iTestamente Elidala iqukethe iziprofetho eziningi mayelana nokuphila kwakhe okungaziqondi. "Kusukela kuMose nakubo bonke abaProfethi, wabachazela kuzo zonke imiBhalo izinto eziphathelene naye." (Luka 24:27) "Wavula ukuqonda kwabo ukuze baqonde imiBhalo." (Luka 24:45) Emakhulwini eminyaka ngaphambi kwesikhathi sikaJesu, izazi zemfundiso yenkolo zamaJuda zazifundela iTestamente Elidala, futhi zithuthukisa "ukuhlaziya" kulo - ukuhlola incazelo yalo yangaphakathi. I "Oral Torah" ibuyele emuva mhlawumbe njengasekupheleni kukaMose, nakuba yayingabhaliwe phansi ngefomu ebizwa ngokuthi iMishnah kuze kube sekhulwini lesibini leminyaka yobuKristu. Ebandleni lobuKristu, ukuhlaziya kubuyele emuva cishe esikhathini sikaKristu, futhi kuqhubeke kuze kube namuhla. I-undersigned yenkolo yale sayithi isekelwe emisebenzini yenkolo ka-Emanuel Swedenborg kusukela ngawo-1700. Nakuba iSwedenborg ngokwakhe engaziwa namuhla, ithonya lemisebenzi yakhe yemfundiso yenkolo liye lalingamanzi futhi elijulile. Phakathi kwezinye izinto, i-Swedenborg yashicilela ukucaciswa okuningiliziwe kwencwadi kaGenesise, incwadi ka-Eksodusi, kanye nencwadi ka-Eksodusi. IsAmbulo, noma i-Apocalypse. Wabuye wachaza izincazelo zangaphakathi zamaHubo, kanye nabaProfethi, futhi wacaphuna amanye amavesi emibhalo kakhulu. i-Swedenborg yabhala ngesiLatini, kodwa izincwadi zakhe zihunyushwe ngezilimi eziningi, futhi sinethemba lokuhlanganisa abaningi babo lapha kubafundi emhlabeni wonke. Kuze kube manje, ku-database yethu eyinhloko, sinezinguqulo eziningi zesiNgisi ezikhona, izinguqulo zokuqala zesiLatini, nezinye izinguqulo zesiPutukezi, isiFulentshi, iSpanishi, iSweden, isiNorway, isiJalimane, isiDashi, isiCzech, isiShayina, isiKorea nezinye izilimi. Ethu ekhasini lethu, sinomsebenzi we-Swedenborg kwezinye izilimi eziningi, futhi, kufomethi ye-.pdf. Sizozithungela ku-database eyinhloko ngokushesha ngangokunokwenzeka, kepha manje i-intanethi, futhi ilungele ukusetshenziswa kwakho. Siqoqe izinguqulo zeBhayibheli ngezilimi eziningi eziyinhloko, ukuze abafundi beBhayibheli ube nendawo elula, elula ukuyisebenzisa futhi ufunde iZwi likaNkulunkulu, futhi uhambe kalula ekuxhumaneni kokuqukethwe okuchazayo. Enye yezingxenye eziyinhloko zephrojekthi yethu ukuthi sinezela ulimi oluthile izincazelo zezindaba zeBhayibheli, amavesi, namazwi aklanyelwe abafundi basimanje. Sengeza amavidiyo, futhi, nezithombe ezisiza ukubonisa imiqondo. Le phrojekthi iqhutshwa phambili yi-New Christian Bible Study Corp., inhlangano engekho inzuzo 501 (c) 3 eyakhelwe lokhu injongo. Sithemba ukuthi le sayithi izokusiza kuwe ekuhambeni kwakho okungokomoya.